Aprepitant powder (170729-80-3) hplc =98% | Yakarura R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Aprepitant powder
SKU: 170729-80-3. Category: R & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva pa gramu kusvika kune zvakakura zveAprepitant powder (170729-80-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Aprepitant powder inoshandiswa nemimwe mishonga muvanhu vakuru uye nevana 6 mwedzi yezera nekure kudzivirira kushungurudza uye kusuruvara kunogona kuitika maawa mashoma 24 mushure mekuwana kenza chemotherapy. Inoshandiswawo nemimwe mishonga kune vanhu vakuru uye vana mizana ye6 yemakore nemakore ekudzivirira kuchengetedza kunonoka uye kusuruvara kunogona kuitika mazuva mashomanana mushure mokuwana mamwe chemotherapy mishonga.
Aprepitant powder video
Aprepitant powder Basic Characters
Name: Aprepitant powder
Aprepitant kushandisa poda
Aprepitant powder mishonga yemishonga inoshandiswa kune vanhu vakuru kukudzivirira kusuruvara uye kurutsa:
kudzivisa kushungurudza uye kurutsa zvinogona kuitika mumaawa mashoma 24 mushure mekugamuchira chemotherapy kurapwa
kudzivisa kunonoka kunonoka uye kurutsira kunogona kuitika mazuva mashomanana mushure mekugamuchira chemotherapy mishonga
kudzivisa kushungurudza uye kurutsa kunokonzerwa nokuvhiyiwa
Aprepitant powder haina kushandiswa kurapa kunyorera uye kurutsa iwe watova nawo.
Aprepitant powder haifaniri kushandiswa nguva dzose kwenguva refu (kushandiswa kusingaperi).
Hazvizivikanwe kana Aprepitant poda yakachengeteka uye inoshanda kuvana.
Iyi mishonga inogona kurongerwa kune dzimwe shandiswa. Kumbira chiremba wako kana wemhizha kuti uwane mamwe mashoko.
Yambiro pamusoro pePrepitant powder
Aprepitant powder inouya se capsule uye sechisimwa chemuviri (liquid) kutora nemuromo. Kuchengetedza kushungurudza uye kurutsa kunokonzerwa nekenza chemotherapy, Aprepitant poda inowanzopiwa kamwe chete zuva nezuva, kana kuti pasina kudya, mumazuva mashomanana ekutanga kwekenza chemotherapy. Iwe unogona kutora Aprepitant powder 1 awa maawa ako asati apedza chemotherapy pamazuva 1, 2, uye 3 yekurapa kwako. Kana iwe usingagamuchiri chemotherapy mumazuva 2 uye 3, iwe uchazotora Aprepitant powder mumazuva iwayo mangwanani. Kuchengetedza kushungurudza uye kusuruvara kunokonzerwa nekuvhiyiwa, Aprepitant poda inowanzoitwa seyero rimwe mukati meawa 3 kusati kwatanga kuvhiyiwa. Tevera mazano ekunyora tsamba yako zvakanyatsonaka, uye bvunza chiremba wako kana wemhizha kuti atsanangure chero chikamu chausingazivi. Tora Aprepitant powder sezvakataurwa. Usatora zvishoma kana zvishoma kana kuitora kakawanda kupfuura zvinorayirwa nachiremba wako.
Aprepitant powder capsules inouya masimba maviri akasiyana. Chiremba wako anokwanisa kupa zvose simba rako raunofanira kutora panguva dzakasiyana. Iwe unofanirwa kuchenjerera kutora simba rakakodzera panguva yakakodzera sezvaunorayirwa nachiremba wako.
Shingai makodhesi yose; usaparadzanise, chew, kana kuapwanya.
Kuregererwa kwemugumo kuchagadzirirwa nemupi wako wehutano wehutano uye hupiwe iwe mumutauri wemuromo. Chengetedza mharidzo yemuromo mufiriji kusvikira yava nguva yezamu yako; zvisinei, inogona kuchengetwa mumakamuri ekupisa kusvika kumaawa e3 isati yashandiswa. Kana wakagadzirira kushandisa, bvisa kapu kubva kune imwe nzvimbo usati waisa mumuromo mako kuti ubudise mushonga wacho zvishoma nezvishoma.
Aprepitant powder inoshanda chete kudzivirira kushungurudza uye kurutsa. Dana chiremba wako kana iwe uchitova nezviratidzo izvi uye usatanga kutora Aprepitant powder.
Kana yakashandiswa kudzivisa kushungurudza uye kusuruvara kunokonzerwa nekenza chemotherapy, Aprepitant powder inowanzoshandiswa chete panguva yekutanga 3 mazuva echikemikari maitiro ekurapa. Usaramba uchingotora Aprepitant powder kwenguva refu kupfuura yakarayirwa nachiremba wako.
A: Muvanhu vanotora Aprepitant powder kudzivisa kushungurudza uye kurutsa kunokonzerwa nekemotherapy, zvinowanzoitika zvinosanganisira:
Mune vanhu vanotora Aprepitant powder kudzivirira kushungurudza uye kurutsira mushure mekuvhiyiwa, zvinowanzovhiringidza ndezvi:
Iri haisi rondedzero yakakwana yemiridzo yemigumisiro. Bvunza chiremba wako kana wemhizha kuti uwane mamwe mashoko.
Taurira chiremba wako kana une chimwe chinhu chinogumbura chinokutambudza iwe kana icho hachiendi.
Dana chiremba wako kune mazano ekurapa nezvemigumisiro.
B: Aprepitant powder inogona kukonzera madambudziko makuru, kusanganisira:
Zviremera zvinokonzerwa neharagic. Allergic reactions inogona kuitika neAprepitant powder uye inogona kuva yakakomba. Rega kutora Aprepitant powder uye tumira chiremba wako pakarepo kana iwe uine zvimwe zvezviratidzo kana zviratidzo zvekugadzirisa zvinokonzera:
kunetseka kufema kana kumedza.
Kukanganisika kweganda kunogona kuitika kazhinji.
Usatora Aprepitant powder kana iwe:
zvinokonzera chero ipi zvayo zvinoshandiswa muAprepitant powder
vari kutora chero yemishonga inotevera:
Kutora Aprepitant powder nemumwe wemishonga iyi kunogona kukonzera zvinetso zvakakomba kana zvinotyisa.
Aprepitant powder imishonga yemishonga inoshandiswa kuchengetedza kushungurudza uye kurutsa zvinogona kuitika mukati maawa 24 mushure mekugamuchira chemotherapy kurapwa. Inoshandiswawo nedzimwe mishonga yekudzivirira kunonoka kunyorera uye kushambidzika kunogona kuitika mazuva mashomanana mushure mekugamuchira chemotherapy mishonga. Aprepitant powder inoshandiswawo kudzivisa kushungurudza uye kurutsa kunokonzerwa nekuvhiyiwa. Aprepitant powder ndeyeboka remishonga rinonzi antiemetics. Izvi zvinoshanda nekuvhara chiito cheeurokinin, chinhu chechisiki muuropi chinokonzera kushungurudza uye kurutsa.
Iyi mishonga inouya se capsule uye injection.
Iyo capsule inotorwa nemuromo kakawanda kamwe kamwe zuva nezuva, kana pasina kana kudya. Kuti udzivise kusuruvara uye kurutsira nekuda kwekemotherapy, iwe uchangotora Aprepitant powder 1 awa isati yawana yako chikwata chekutanga chemotherapy, uye zvino mangwanani oga oga kwemazuva 2 anotevera. Kuchengetedza kushungurudza uye kusuruvara kunokonzerwa nekuvhiyiwa, Aprepitant poda inowanzoitwa seyero rimwe mukati meawa 3 kusati kwatanga kuvhiyiwa.
Mujoyo unopiwa pazuva 1 ne capsule inotorwa pamazuva 2 uye 3 kana kuti jekisi inopiwa pazuva 1 uye hapana ma capsules anotorwa mumazuva anotevera.
Zvinowanzovhiringidza zve capsule zvinosanganisira kuvhiringidzika, kuvhiringidza, uye kuneta. Zvimwe zvinowanzovhiringidza zvejairo zvinosanganisira hiccups, kuneta, uye kuchinja muropa chiito chekuongorora ropa. Usafambisa kana kushandisa mishonga yakasimba kusvikira iwe uchiziva kuti Aprepitant powder inokukanganisa sei.
IV. Ungatenga sei Aprepitant powder kubva kuAASRAW?
Aprepitant Raw Powder Recipes
Fat Kurasikirwa poda (13)